Fanamarihana tsara indrindra noraisiko tao amin'ny bilaogiko | Martech Zone
Fanamarihana tsara indrindra noraisiko tao amin'ny bilaogiko
Friday, May 18, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Ny bilaogiko dia nahazo fiheverana kely tao anatin'izay volana vitsivitsy izay ary ny olona dia tsara fanahy loatra tamin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo. Ny zava-misy ilain'ny olona fotoana handoavana ahy fiderana na hisaorana ahy dia mahafinaritra. Tena manosika ahy hiezaka ny hanao ezaka bebe kokoa amin'ny lahatsoratra tsirairay. Manana fanehoan-kevitra mahafinaritra aho hatramin'ny nanombohako ny bilaogy, saingy tsy maintsy zaraiko aminao ity taratasy ity. Tena nahatonga ny androko io! Izy io koa dia porofon'ny fiantraikan'ny bilaogy. Talohan'ity fanamarihana ity dia tsy fantatro akory hoe mpamaky i Mitch… zahao ny naotiny:
Izaho dia mpamaky maharitra sy mpamaky ny bilaoginao. Te hitifitra mailaka ho anao aho mba hampahafantarinao anao ny tanjoko.
Ny tenako sy ny namako, izay samy mpianatra ambany taona ao amin'ny Oniversiten'i McGill any Montreal, Canada, dia nanangana orinasa mpanohana mpanjifa an-tserasera vaovao. Nampiasainay ny fampianarana maro avy amin'ny bilaoginao tamin'ny fampivoarana ity orinasanay vaovao ity.
Nantsoina ny orinasanay ClixConnect ary manolotra serivisy tena manavao ho an'ny mpanjifa an-tserasera. Ny zavatra ataontsika dia manolotra serivisim-pifandraisana mivantana avy any ivelany ho an'ny tranonkalan'ny olona (mampiasa ny bokotra live-chat kely hitanao amin'ny tranokala). Ny tompona tranokala dia afaka mamaly ny fanontanina amin'ny chat rehefa misy izy ireo, ary rehefa tsy misy izy ireo dia hisy olona avy amin'ny foiben-telefaonantsika hiantso ny fangatahana ho azy ireo, 24/7/365.
Antsasaky ny fanavaozana izany. Ny singa tena manavao ny ClixConnect dia ny fananantsika haitao vaovao ao amin'ny rindrambaiko izay mamela ny tolo-kevitry ny chat mandeha ho azy ho an'ny mpanjifa, miorina amin'ny vokatra izay jereny. Ka lazao fa misy mijery t-shirt mena amin'ny tranokala iray, misy varavarankely chat mandeha ho azy afaka manolotra pataloha manga ho azy ireo.
Nandany 6 volana teo ho eo izahay nanomanana izany, ary niara-niasa tamin'ny olona tany Canada, Etazonia, Romania ary Pakistan hanangana azy.
Te hampahafantatra anao fotsiny aho fa ny fahitana ny Martech Zone dia tena nanampy anay hahatratra ny toerana misy antsika ankehitriny, ary tena ankafizinay izany.
Misaotra indray Douglas!
Tena mendri-piderana aho! Taratasy mahatalanjona. Tsy azoko lazaina aminao ny dikany lehibe tamiko ny famakiana an'io naoty io. Ny tsara indrindra amin'ny Clixconnect, Mitch! Hizaha ny fangatahanao aho ary hiezaka hatrany hitondra atiny manampy anao!
May 18, 2007 amin'ny 9: 06 AM
Tena mahafinaritra izany, indrindra fa avy amin'ny mpianatra. 18 volana lasa izay dia nandeha tany amin'ny Sekoly Graduate tany Eoropa ny iray amin'ireo mpiasako. Nitsidika 4 herinandro lasa izay izy ary nilaza tamiko fa ny PR sy ny fomba fiasa ara-barotra stratejika nozaraiko taminy tamin'ny asa teto, dia nanome azy tombony matanjaka sy mifaninana eo amin'ireo namany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nanana hevitra izy.
Tohina lalina aho satria lehilahy tsara fanahy izy ary hanao zavatra lehibe maro eo amin’ny fiainany.
Azoko antoka fa misy maro hafa any toa an'i Mitch izay nahazo hery tamin'ny asanao.
May 18, 2007 amin'ny 9: 28 AM
Misaotra Neil… ny fanehoan-kevitra sy ny taratasy toy izao dia tena manentana kokoa noho ny bonus rehetra. Tena nahafinaritra ny namaky an'ity.
Ny ankamaroan'ny bilaogiko dia miorina amin'ny fanehoan-kevitra, ka inoako fa fanamarihana iray ahafahantsika rehetra mahatsapa izany!
May 19, 2007 amin'ny 6: 34 AM
Ny fifandraisana azoko avy amin'ny fandraisana fanehoan-kevitra no ampahany mahafa-po indrindra amin'ny fanoratana ny bilaogiko, ary manampy ahy hiezaka mankany amin'ny votoaty tsara kokoa sy tsara kokoa izany.
Tantara mahafinaritra io Doug, ary ny vokatra naterak'izy ireo dia hevitra mahafinaritra, mety hieritreritra ny hampiasa azy aho amin'ny ho avy.
Azo antoka fa nampiasa ny maro amin'ireo tolo-kevitrao tao amin'ny bilaogiko aho ary efa manakaiky ny mpamaky 200 (aorian'ny volana vitsivitsy monja) amin'ny feedburner, ary izany dia noho ianao.
Tohizo ny asa tsara,
May 19, 2007 amin'ny 9: 27 AM
May 21, 2007 amin'ny 6: 34 AM
Fantatro fa nahafinaritra anao izany! Ny fanehoan-kevitra toy izany dia mahatonga anao hahatsapa ho miavaka foana.
Manana mpitsikilo be dia be ao amin'ny bilaogiko aho ary maro amin'izy ireo no mandefa mailaka ahy tsindraindray ary mivoaka izy ireo indraindray.
"Mitenena" indraindray dia misy fiatraikany bebe kokoa amiko noho ny an'ireo mpamaky ahy tsy tapaka satria tsy nampoizina mihitsy. 🙂
Vao avy nahita ny tranokalanao aho tokony ho roapolo minitra lasa izay. Efa namaky vitsivitsy tamin'ireo lahatsoratrao aho ary nasiako tsoratadidy/nampifandraisina taminao mba ahafahako miverina rehefa manam-potoana bebe kokoa.
Nieritreritra mafy ny hitondra ny bilaogiko ho amin'ny ambaratonga manaraka aho ary ny fampahalalana avy amin'ny tranokala, toa ny anao, dia tena hanampy ahy amin'ny famadihana ny nofinofiko ho zava-misy.
Efa roa taona mahery aho no nitoraka bilaogy, saingy niova ny tanjoko, tato anatin'ny volana vitsivitsy.
May 21, 2007 amin'ny 6: 46 AM
Misaotra Vegan Neny! Hijery ny tranokalanao koa aho. Tsy Vegan aho, fa tena manaja ny fanoloran-tena ilaina. Ary mazava ho azy fa Neny ianao, asa sarotra indrindra! Dada tokan-tena aho ka miezaka (ary tsy mahavita) manao satroka roa.
Ampahafantaro ahy raha afaka manampy anao amin'ny zavatra aho!
May 21, 2007 amin'ny 7: 06 AM
Tena hametraka fanontaniana aho. Amin'izao fotoana izao dia tsy hitako izay hanontaniana! Ny marketing, ho an'ny bilaogiko, dia mbola vaovao amiko. Mihaino sy mamaky ary mianatra aho.
Reny tokan-tena aho ary eny fantatro ny tianao holazaina amin'ny fiezahana hanao satroka roa. 🙂